Ikhaya » Iinkonzo zeendaba zeWire » Ubhishophu wamaKatolika ujolise eSri Lanka
Ubhishophu wamaKatolika ujolise eSri Lanka
UBhishophu uChristian Noel Emmanuel
"Amalungu aliqela ePalamente akhoyo ngoku kunye nawaseTamil, iintatheli zaseTamil kunye neenkokheli zoluntu nazo bezijolise kubo"
Esinye sesibheno sikaWalk for Justice kukuThumela iSri Lanka kwiNkundla yamaLungelo oLwaphulo-mthetho yaMazwe ngaMazwe (Crimes Against Humanity & Genocide Commibated Against Tamil People By Sri Lankan state).
Kwimeko ephucukileyo yeziganeko, uBhishophu wamaKatolika eSri Lanka wayejolise ekuchaseni uhambo lukaTamil lobulungisa luyaqhubeka. UBhishophu waseTrincomalee uChristian Noel Emanuel unikwe umyalelo wokuhlala ngamapolisa ekuthatheni inxaxheba kwiWalk for Justice for Tamils.
Olu hambo lobulungisa luhlelwe yimibutho yaseNtla naseMpuma yoLuntu yokuqhankqalaza ukuphathwa gadalala nxamnye neTamil kunye nokuqaqambisa isibheno esidibeneyo seTamil kuMkomishinala oPhezulu we-UN wamalungelo oluntu nakwamanye amazwe angamalungu eBhunga lamaLungelo oLuntu le-UN. Esi sibheno siquka isicelo sokuthumela iSri Lanka kwiNkundla yamaLungelo oLwaphulo-mthetho yaMazwe ngaMazwe (Crimes Against Humanity and Genocide) eyenziweyo nxamnye nabantu baseTamil ngurhulumente waseSri Lankan.
Amalungu aliqela ePalamente akhoyo ngoku kunye neLungu lePalamente, intatheli zaseTamil kunye neenkokheli zemibutho yoluntu nazo zanikwa imiyalelo yokuhlala zingabathinteli okanye bathathe inxaxheba kolu hambo.
Olu hambo lucwangciselwe ukuba luqale ngomhla wesithathu kwinyanga yoMdumba ukusuka ePothuvil kwiphondo leMpuma kwaye luzakuphelela ePolihandy kwiphondo laseNtla.
Ukuhamba kukuqaqambisa le micimbi ilandelayo:
I-1) Ukuqhubela phambili komhlaba kwiindawo zaseTamil kunye nokuguqula iindawo zemveli kunye nezembali kwiindawo zaseSinhalese ngokuseka iitempile zamaBuddha emva kokutshabalalisa iitempile zamaHindu. Ukuza kuthi ga ngoku iitempile ezingama-200 zamaHindu ziye zenziwa.
2) AmaSilamsi asweleke ngenxa ye-COVID atshisiwe ngokuchasene neminqweno yeentsapho kunye neemfundiso zamaSilamsi.
I-3) IiTamil kwiindawo eziphakamileyo bezisoloko zifuna ukunyusa imali eyi-1,000 rupees, kodwa urhulumente akaphenduli kwiimfuno zabo.
I-4) okoko yaphela imfazwe kwiminyaka elishumi eyadlulayo, umkhosi wezomkhosi waseTamil uyaqhubeka kwaye isazisi sembali seTamil sitshatyalalisiwe ngenjongo yokutshintsha idemokhrasi endaweni yeSinhalese, kusetyenziswa amasebe karhulumente ohlukeneyo, ngakumbi amasebe ezinto zakudala. Kwakhona, iindawo ezixhaswa ngemali nguRhulumente ziyaqhubeka.
5) Abanini beenkomo zaseTamil bajongene neengxaki ezininzi, apho iindawo zabo zokuhlalisa zihlala ngabantu baseSinhalese kunye neenkomo zabo ezibuleweyo.
I-6) I-PTA isetyenziselwe ukuvalela ulutsha lwaseTamil ngaphandle kokuhlawuliswa okanye ukulingwa ngaphezulu kweminyaka engama-40 ngoku kusetyenziswa ngokuchasene namaSilamsi.
7) Amabanjwa ezepolitiki aseTamil avalelwe iminyaka engenatyala. URhulumente uxolela iSinhalese rhoqo, kodwa akukho nalinye kumabanjwa ezopolitiko aseTamil axolelweyo.
I-8) Iintsapho zabo banyanzelisiweyo ukuba banyamalale bebeqhankqalaza ukufumana abo babathandayo, kodwa uRhulumente uyala ukubanika impendulo.
9) Iithayile ziye zalahlwa ilungelo lokuKhumbula ukufa kwabo emfazweni, njengoko kubonisiwe ngokwala iziganeko zokukhumbula, ukutshatyalaliswa kwamangcwaba abafileyo, kunye nokudilizwa kwezikhumbuzo.
10) Urhulumente ujolise kwiintatheli zaseTamil ezigubungela ezi mpatho mbi kunye nabaphembeleli boMbutho woLuntu baseTamil abakhalazela oku kuxhatshazwa.
11) Ukuphumeza isiBheno esiDibeneyo saseTamil kuMkomishinala oPhezulu we-UN wamaLungelo oluNtu nakwiBhunga lamaLungelo oluNtu le-UN amazwe angamaLungu.
2) UVelan Suwamikal: + 94-77-761-41 21